Need chọrọ ebe nchekwa RAM dị ukwuu na ama? | Gam akporosis
Ọ dị anyị ezigbo mkpa ebe nchekwa RAM na ngwaọrụ?
Taa anyị nọrọ obere gbagwojuru anya site imewe mkpebi nke OnePlus 3 nke rụpụtara na smartphone na ọ "capped" na software nke mere na ị gaghị eji 6 GB nke RAM ndị rere nnukwu izu ndị ahụ na-agbapụ na elu nke hype maka ọnụ a. Ikekwe okwu ahụ bụ "capado" na-ada ntakịrị ike, mana ọ dị karịa ma ọ bụ pere mpe. Na-ewepụ okwu ahụ capado, yana ihe ọ gụnyere, ị ga-enwe smartphone nke na-eji RAM ma na-a theụ batrị n'ụzọ nkịtị. Ọfọn, anyị ga-ahụ nsonaazụ ọ nwere n'ezie mgbe ROM ndị mbụ nwere faịlụ ndị OnePlus kesara amalitela bipụtara, mana ọ bụrụ na ha kwuru ya n'onwe ha, ọ ga-abụ maka ihe.
Ya mere, anyi na-eche ozugbo ma anyi choro otutu RAM na ngwa ayi. Ọfọn, ọ dịka ọ ga-abụrịrị na anyị ga-enwerịrị ncheta, mana maka ihe kpatara nke ahụ dị ntakịrị na nke ahụ bụ na ndị mmepe ngwa na-adị a bit 'umengwụ' na optimizing software nke ọma. Ọ bụrụ na ngwanrọ ahụ mepụtara nke ọma, ọ gaghị achọ nnukwu RAM, mana ọ dị ka anyị ejirila ngwa dị ka Facebook, Chrome ma ọ bụ ndị sitere na ndị mmepe indie (anaghị m ekwu na ha niile nwetara ya) na - emebi ihe nke sistemụ na m nwedịrị ndụ nke batrị ma ka anyị hụ ọnụ nwere ikike karịa 5.000 mAh. Anyị na - erute ọkwa na anyị ga - agafe na RAM nke PC anyị!
1 Emezighituri software
2 Ihe njikarịcha na njikarịcha
Anyị ekwuola ọtụtụ oge banyere oke ịba ụba nke akụ nke ngwa Facebook. A ọdụ ụgbọ mmiri rụrụ site na nsụgharị iOS nke na-ewepu batrị na RAM nke ekwentị anyị. Ọ bụrụ na ị mepee ngwa ị maara na akpa ahụ, na nke a, ngwaọrụ ahụ, ga-enwe RAM zuru ezu nke na ọ dị ugbu a dị ka usoro ndabere, onye nrụpụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ ekwesịghị ịpịpụta ụbụrụ ha ka ọ buru ya. ọdịdị gị kachasị mma.
N'ihi na na njedebe nke ụbọchị ihe ị na-eme bụ igbu ijiji na egbe egbe, dị nnọọ ka otu onye ọrụ na blog a jiri amamihe kwuo Banyere nsogbu nke njikwa RAM na OnePlus 3. Ọ bụrụ na ị mụbaa RAM iji mee ka usoro ahụ gaa nke ọma, ọ na-eme nke ahụ chọkwara batrị ọzọ; Site n'inwekwu batrị, ọnụ "fattens" na ọkpụrụkpụ na, na mberede, na-abawanye ọnụahịa nke ngwaọrụ ahụ; ya mere ọ bụ akụkọ ọjọọ niile.
Ihe njikarịcha na njikarịcha
Na ọ dị ezigbo mma ịsị na amaghị m ole gigabytes nke RAM ị nwere, na ị dị iche na ndị ọzọ, mana mmadụ nwekwara ike ịkọwa ọdịiche dị n'etiti ndị ọzọ ọ bụrụ na sọftụwia gị ka emepụtara nke ọma nke mere na ọbụnadị usoro adịghị arọ nke ukwuu. Ikekwe na gam akporo enwere ntakịrị imetụ aka n'ihi na ọ dabere na Google, mana na ngwa ndị na-eweta ụfọdụ usoro ọdịnala dịka TouchWiz, ọ ga-abụ n'ihi enweghị ọchịchọ, omume ọjọọ ma ọ bụ achọghị itinye ego zuru ezu iji tinye akwa ahụ Arụghị ọrụ, nchịkwa na njikwa njikwa usoro usoro usoro na ebe nchekwa.
Anyi aghaghi ihu na enwere ngwa na Google Play Store na maka 1,5MB ha na-eme dị ka nke ọma karịa ndị ọzọ nwere otu njirimara na nke ahụ mezuru, nwayọ, 50MB. MiXplorer bụ otu ihe atụ maka nke a, ma ọ bụrụ na anyị eleba anya na ES File Explorer, nke na-arụkwa ezigbo ọrụ na nke a, ọ gafere 8MB, ugboro anọ karịa, na nkenke. Ma ọ bụ egwuregwu vidiyo nke ahụ M kwuru n’oge na-adịbeghị anya banyere ya, Mekorama na 4 MB; anyị na-ekwukwa banyere egwuregwu dị oke mma, ọ bụghị otu n'ime ndị nkịtị ahụ.
Yabụ, mgbe emechara ihe iji chee ọdachi a ihu na RAM, anyị kwesịrị ile anya nke ọma ndi otutu GB nke RAM ghara ebufu gi na smartphones ndị ọzọ, nke mere na, na njedebe nke ụbọchị, enweghị nnukwu ngwa, dị ka mbipute desktọọpụ Adobe Photoshop, anyị enweghịkwa ike iche n'echiche inwe ngwa 300 arụnyere na ọtụtụ narị usoro ndabere; ndụ batrị ga-apụ n'anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ọ dị anyị ezigbo mkpa ebe nchekwa RAM na ngwaọrụ?
Carlos Jimenez Rams dijo
Gwakọta balloons na tomato? RAM ebe nchekwa na nha ngwa. Facebook na ndị mmepe indi. Enwere m op3 maka ụbọchị ole na ole iji dochie op2 dị egwu. Agaghị m ala azụ. Mee ka ngwaahịa ahụ dị oke ọnụ? O na efu otu ihe op2 bidoro, 4gb ram 64rom. Ọkara nke galaxy s7 nke ha jiri ya tụnyere.
Zaghachi Carlos Jiménez Rams
Oscar Hvbyco dijo
Ya mere, anyị kwesịrị ya ma ọ bụ? Achọrọ m ịzụta Otu gbakwunye 3 maka nke ahụ
Zaghachi Oscar Hvbyco
Ewezuga OnePlus 3 ị nwere nhọrọ ọzọ? Ka anyị hụ, ọ bụ nnukwu ekwentị ... ma ọ bụrụ na ha ekpuchi ya, ọ bụ ka ọ ghara iri batrị ahụ. Nwere ike ịnwale otu omenala ROMs na-enweghị oke.
Joseph Gonzalez dijo
Ngwa a kachasị mma ka ị ghara iji ọtụtụ ebule ma nwee batrị ọzọ abụghị ụlọ ọrụ akpọrọ ... ka anyị lee ma m chetara .... Manzana ??? Mba, ọ nweghị ike. Apple maka ọtụtụ Androidbots na-eme ihe niile na-ezighi ezi. M ga na-arọ nrọ. Ma lee ka ọ ga-esi dị mma ...
Zaghachi Josep Gonzalez
Google ngwa ngwa bụ usoro ọhụụ ọhụụ abụọ maka gam akporo na iOS
Etu esi etinye GIF animated na desktọọpụ mkpanaka gị